AddShoppers: Barmaamijka Adeegyada Bulshada ee Ganacsiga | Martech Zone
AddShoppers barnaamijyadu waxay kaa caawinayaan inaad kobciso dakhliga bulshada, ku dar badhamada wadaagista oo ay ku siiso Analytics ku saabsan sida bulshada u saameyneyso ganacsiga. AddShoppers wuxuu ka caawiyaa bixiyeyaasha e-commerce adeegsiga warbaahinta bulshada si ay u sameeyaan iibsiyo badan. Badhamadooda wadaaga, abaalmarinta bulshada, iyo iibsiga barnaamijyada wax wadaagga ayaa kaa caawinaya inaad hesho saamiyada bulshada oo badan ka dibna u rogi kara iibka bulshada. AddShoppers Analytics kaa caawin doona inaad la socoto soo noqoshadaada maalgashiga iyo inaad fahanto kanaallada bulshada u beddelaya.
AddShoppers waxay kordhisaa kaqeybgalka macaamiisha iyadoo lagu darayo dallacaadaha bulshada qalabka wadaagista bulshada. Ka sokow kordhinta hawlgelinta, isku darka dallacaadaha ku-dallaca bulshada iyo wadaagga bulshada waxay gacan ka geysaneysaa yareynta ka-tagista dukaamaysiga iyo kordhinta heerarka beddelaadda.
Barnaamijyada ka dhigaya keydkaaga internetka mid bulsheed
Badhannada Baraha Bulshadda Bulshadda fududee inaad kordhiso taraafikadaada iyo iibkaaga gudbinta bulshada. Badhamadooda wadaagga waxay awood u siinayaan wadaagista alaabada si fudud macaamiishaada si ay ula wadaagi karaan waxyaabaha ay jecel yihiin shabakadaha bulshada ay ugu jecel yihiin
Abaalmarinta Bulshada waxay kaa caawineysaa inaad kordhiso wadaagga wax soo saarka bulshada adoo abuuraya barnaamij tixraac bulsheed adoo dhiirigelinaya isticmaalka badhanka wadaagga. Barnaamijkani wuxuu kaloo ka caawiyaa kordhinta qiimaha is-beddelka iyada oo hoos u dhigaysa ka-tagista alaabada dukaamaysiga ee sanduuqa kuubanka ah.
Falanqaynta Bulshada waxay kaa caawineysaa inaad fahamto waxqabadka bulshada ee dukaankaaga adigoo raacaya dhammaan howlaha wadaagga ka dhacaya dukaankaaga. Waad arki kartaa inta jeer ee badeecad kasta la wadaagay, yaa wadaagay, imisa guji qayb kasta ayaa wadday, iyo inbadan.
Raadinta Bulshada ROI waxay kaa caawineysaa inaad fahamto qiimaha ficillada bulshada ay u leeyihiin dukaankaaga. Isticmaalka barnaamijkan, waxaad cabbiri kartaa qiimaha Like, Tweet, Pin, iyo ficilada kale ee bulshada.
AddShoppers Iibsiga Wadaagista waxay ka caawisaa macaamiishaada inay saaxiibadood la wadaagaan wixii ay soo iibsadeen.
Gidaarka daahfurka (Pro) barnaamijku wuxuu fududeynayaa in lagu daro darbiga alaabooyinkaaga bulsheed inta badan bartaada. U oggolow dadka wax iibsanaya inay ogaadaan alaabada sida ay u socdaan xilliyada dhabta ah ee shabakadda bulshada.
Soo Gal Bulsho Dukaan (Pro) ayaa isku xidhaya farqiga u dhexeeya login bulshada iyo Soo galitaanka eCommerce. La dagaallama foomamka diiwaangelinta-dilista adoo awood u siinaya calaamado aan xaddidneyn u leh macaamiishaada oo leh goobo horay loo buuxiyey. Ku kobci xogtaada macmiilka qodobo bulsheed.
AddShoppers wuxuu kaxeeyaa $ 1,000,000 bishii iibka bulshada. Waxay awood u siinayaan xogta hawlgelinta bulsheed ee hodanka ah, caadiga ah iyada oo loo marayo API-yada waxayna siiyaan aragti qoto dheer kuwa saamaynta leh. Nidaamkooda xiran ee loo yaqaan 'ROI platform' ayaa u oggolaanaya u doodayaasha inay wadaagaan goorta, meesha, iyo sida ay rabaan waxayna awood u siinayaan heerar badan oo ku-xirnaan iyo dhiirrigelin ah si loo wado u-doodista macaamiisha.
AddShoppers hadda waxay leedahay isku-dhafnaan wax soo saar leh oo kala ah Klout, Wishpot, RJ, Metrics, Rapleaf, Bronto, Google, Analytics, MailChimp, SilverPop, Vertical, Response, ExactTarget, Strong, Mail, Listrak, WordPress, Accenture, Omniture, Site, Galiye, Xing, LinkedIn , tumblr, Kaboodle, Polyvore, StumbleUpon, Google+, Twitter, Pinterest, NetSuite, Zoho, Salesforce, hubspot, cafis, Marketo, eloqua, Act-On, Tagman, tealium, ensighten, google, tag, manager, openbravo, openerp, sap , cinwaanka isku xirka, isku xidhka, xudunta, dhalaalaya, CubeYou, Emma, ​​Suuqgeynta, Piwik, Rabitaanka, Wanelo, Webimax, Adobe, Duufaan, Taag, Maamulaha, Lexity, Webtrends, Epicor, Sage, ERP, Oracle, JD, Edwards, Microsoft, Dynamics , GP, SAP, Ganacsiga, Hal, IBS, Shirkad, Intacct, Svpply, Responsys, iyo CheetahMail.
Tags: AccentureAct-Onisku -darradaadobeAnalyticsdhalaalBrontoganacsiGaliyeCheetahMailcinwaanka ku xirxuduntaAdigudynamicsbarnaamijka bulshada ee ecommerceEdwardscodkarnimoEmmafiirsashoganacsiEpicorERPsaxsangoogle +GPhubspotIBSDhaawacJDKaboodlekloutdabacsanaanLinkedInListrakMailmailchimpTababaraha kooxdamarketingsuuqojaangooyooyinkaMicrosoftnetsuitexoog -saaridMid ka mid ahfuranbravoOpenERPOraclecafisPinterestPiwikPolyvorerapleafWaxqabadkajawaabahaRJSageiibindheecaanSilverPopSiteganacsiga bulshadaStormStrongturunturoonSvpplytagtagmanTealiumtumblrTwitterverticalWaneloWebimaxwebtrendsjeclaanRabitaankaWordPressXingZoho
Maxay Tahay Mawduucaaga xiga ee WordPress inuu jawaab u ahaado
Gaaritaan si aad uga caawiso ganacsiyada maxalliga ah inay helaan macaamiil badan